Faberlic Supplements Pfungwa Yekurongedza - Dhizaini magazini
Pfungwa Yekurongedza Munyika yemazuva ano, vanhu vanogara vachivhenekwa nemhirizhonga inokonzeresa kunze kwezvinhu zvakaipa. Ecoology yakashata, iyo iripo yekurarama yehupenyu mune megalopolises kana kushungurudzika kunotungamira kuwedzera mitoro pamusoro pemuviri. Kugadzirisa uye kugadzirisa hutano hwekushanda hwemuviri, zvinowedzera zvinoshandiswa. Dimikira rakakura reichi chirongwa rave dhayaini yekuvandudza hutano hwemunhu nekushandiswa kwezvekuwedzeredza. Zvakare, iyo huru graphic element inodzokorora chimiro chetsamba F - tsamba yekutanga muzita rechiratidzo.
Zita rechirongwa : Faberlic Supplements, Vagadziri zita : Dmitry Kultygin, Izita remutengi : Dmitry Kultygin.
Pfungwa Yekurongedza Dmitry Kultygin Faberlic Supplements